Konsartii Oromoo Frankfurt Germany irrati - Caboowanci.com-Oromia
January 28, 2018 January 28, 2018 Nadhani	0 Comments #Ooromoprotests, Ethiopia, Germany, OBN, OLF, OMN, ONN, Oromo
Guyyaan Kun Guyyaa Murteessaa Oromoof
Akkumu beekamuu guyyaa gaafa Feberary 3 bara 2018 akka lakkoofisa Faranjitti magaala Frankfurt biyya German keessati sa´aat 16:00 amma Halkan 02:00 irrati Artisitootini keenya kabajamoofi jaalatamoon Galaanaa Gaaromissa fi Lata Qana´ii Saba keenya biyya Awuroppaa garaa garaa keessa jiran wal arguufi gamachiisuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiru ana dhufu jennaani!
Hundi keenyaa akkuma beekinnuu Artistoonni kun Hayyootaafi beektoota Oromoon qaban keessaa isan tokko akkasumas Ija Oromoofi Qaroo Oromoon qaban keessaan isan tokko dha. Kanaaf Sabinni Oromoo hundii akkasumas Frootan Oromoo hundii akkuma kanaan duraa hardhas wal bira dhaabannee Milkaa´ina saganitaa kanaafi bareedina saganitaa kanaa irrati argamuudhaaf akkasumas dandeetii keessaniin, gorsa keessaniin, eegumissa keessani, akkasumas bakka barbachisaa ta´uu hundaa irrati Dawwoo ta´uudhaan milika´iina Konsartii kanaa irrati akka gahee guddaa fudhatan kabajamani isin afeerra!
Akkuma hundii keenya beekinnutti yeroo ammaa kanati Biyya keessas ta´ii biyya alaa kana keessa diinni Oromoo bayye ta´uu jira. Diina keenyaa kana moo irra aanuufi mo´aachuu kan dandeenyuu yoo wal dhageefanneefi wal kabajinne akkasumas waliin taaneedha ykn tokko taaneedha. Oromoon hunduu dhaaba Siyyasaatiin otuu gar gar wal hinqoodiin, Amanitaadhaan wal hin qoodiin akkasumas naannoodhaan wal hin qoodiin Oromummaa irrati bu ´úra godhannee Oromummaa akka cimisinuuf jechaa wal cinaa ykn wal bukkee haa dhaabannu!
Sabinni keenya kan beekuu qabu tokko yeroo amma kanatti Saba Oromoo maqaa balleesuuf xureesuuf jecha Oromoo fakkaatanii Naamussa ykn gochaa ilimmi Oromoo tokko hojjachuu ykn dalaguu hin dandeenyaa dalaguudhaaf caraaqaa akka jiran Oddeefannoon akka nu qaqabee beekinna. Kanaaf jechaa Sabinni Oromoo hunda gochaa Saba kana saalfachiisuufi yakka Maqaa Saba kanaa dahoo godhatee as bahuu hundaa dabrsinnee akka beekinnufi enyumaa isaa ykn ishii beekuun dirqama Oromoo hundaati. Kanaaf Sabinni Oromoo hundii beeku kan qabu enyuu enyuu akka isin cinaa ykn bukee jiru fi enyuu maal akka gochaa jiru karaa danda´ameen Vedio warraabii ta´ee Suuraa kaasuudhaan akka ragaati qabatamee karaa Seeraan gaafatamuu danda´amuu irratis hojjachaa jirra akkasumas hunduu dirqama mataa isaa qaba. Biyya Seeraafii Heerri jiru keessati namuu badii tokko yoo dalagee Seera jalaa akka hin baaneefii akka itti gaafatamuu beekamaadha garuu Sababa nama muraasaaf jechaa namoonni kumaataminni jeeqamuufi yaaddoo keessa galuu hin qabu jechaafi.Diinni Oromoo moo kana gochuuf duubatii waan hin deebineef uummanni hundaa kana samuu isaatti qabatee rakkoon tokko otuu hin uumamiin namoota nageenyaa eegaa jiran ykn Securty irrati gabaasa gochuun barbachisaadha.
As irrati diinas ta´ee enyuu illee yoo ta´ee waan fedhee ykn waan yaade dubachuufi gaafachuu mirga qaba. Garuu darbee mirga nama biraa yoo nan dhiiba jedhee akkasumas nan cabissa jedhee nama sana kan bilisa isa baasus kan isa itti gaafatamisiisuu Seera waan ta´eef naminnii Umuriin isaa wagaa 16 ol ta´ee Seeran itti gaafatamuun isaa hin oluu. Namoonnis dhuguudhaan akkasumas machaa´uudhaan nama jequuf qophaa´ani yoo jiraatee ta´ee Seeraan itti gaafatamuu waan ta´eef kana beekanii waan godhanii irrati itti gaafatummaa isaanii fudhatuu jechaadha. Kanaaf dhuganii ykn macha´aanii Konsartii kana galuun dhorkaadha jechaadha. Asi irrati dabalataan da´iiminni wagaa 16 gadii amma Sa´aati 22:00 ol turuu hin danda´ani!
Adaa Oromoo keessayyis kan fudhachuu qabinnuufi barachuu qabinnu tokko Oromoon, Oromoof qofa mitti alagaafi illee fira ta´ee maatii ta´ee nama alagaa tokko akka da´ima issaa walqixee guddifata. Kanaaf aadaan sun baduu hin qabu. Oromoo kan wal balleessu wal irrati duuluu otuu hin ta´iin kan wal guddisuuf wal jiraachisuu ta´uu qaba. Oromoon yeroo ammaa kanati waajjin tokko dhaabatee, ykn Suuqii akkasuma galma kan Oromoon irrati wal geessu, mana nyaataa Oromoo, mana dhugaatii ykn Mana Bunaa Oromoo tokko biyya alaa kana keessaa hin qabinnu beekamaadha. Kana Kana gugurdisuu irratifii waan Oromoo tokko guddisuu irrati tataafii haa guunnu malee hardhaa maqaa hin taanee wal irrati moogaasineefi baafinnee wal dadhabisiisuun haa dhaabatuu. Oromoo yeroo ammaa kan ijaaraa jiru buruu oromoo ta´ee dhaloota haara kana tokko gochaa jiru ijaaraa hin jiru. Garuu kan boru irrati wal nu ficcisiisuu fi hojii manaa ykn assignment Awuroppaa fi Arabaa ijaarachaa jirra.
Kanaaf balleesuuf wal qoqooduuun bu´aafi furmaata tokko illee nuu fida jenne waan yaannu mitti. Dhalloonnu kun maal barbaada maal fedha kan jedhu addaan baasinnee beekuun nu irra jira. Keessatu karaa ifa ta´eef karaa nagaa wal amanissanii garaagaruumman illee yoo jiraatee waan tokko ta´an irrati wajjin hojjachuuf ta´uun barbachisaadha.
Kun otuu kanaan jiru wa´een Konsertii kanaa moo garaagarummaa tokko fiduufi qoqoodinoota tokko umuufi mitti. Ummata Oromoo walitti fidee yeroo nagaa wajjin dabarsuuf malee dhaaba tokko jibanii dhaaba tokko jaalachuufi mitti. Akkasumas Amantaa tokko jaalatanii Amantaa tokko jibuuf mitti. Naannoo tokko jaalatanii Naannoo biraa jibbuufi mitti. Afuura Oromoo hundaa kan ofi keessa qabu, Oromummaa kan hundaa wal qixa wal kabajee wal faana jiraatu malee enyuunuu kan hin deegaraminne Oromoo hundaan kan deegaramuudha!
NB. Diina keenya irraa dheenissee otuu hin taanee itti siqinnee fira godhannee mo´achuus ni dandeenya. Yoo itti siqinnee karoora fi karaa inni ykn ishiin itti nu kiyyoo keessa galichuuf jette sana irraa barree nuttis mala qopheefanna. Kana jechuun gochaa diina keenyaa hirraanfachuufi miidhaa biraa umata keenyaan gahuuf mitti.
← Waajjirri Xiyyarii Itiiyyoophiyyaa Gurguramee
Oromootu Oromoo Ajjeechisiisee →